Ị̀ chọtatụla ọlaedo? Ọtụtụ ndị achọtatụbeghị. Ma, ọtụtụ nde mmadụ achọtala ihe bara uru karịa ọlaedo. Ọ bụ amamihe Chineke, nke a na-agaghị ejili “ezi ọlaedo gbanweta.”—Job 28:12, 15.
E NWERE ike ikwu na ndị jí obi ha niile na-amụ Baịbụl yiri ndị na-achọ ọlaedo. Ndị na-amụ Baịbụl kwesịrị ịna-agbasi mbọ ike, na-amụsikwa Baịbụl ike ka ha nweta amamihe na-enweghị atụ. Ebe anyị na-amụ Baịbụl, olee ihe anyị ga-amụta ma anyị leba anya n’ụzọ atọ e si achọta ọlaedo?
MMADỤ NWERE IKE ỊHỤ ỌLAEDO NA MBEREDE
Ka e were ya na ị nọ na-aga n’akụkụ osimiri, hụ ihe yiri irighiri nkume na-egbuke egbuke. Gị ehulata welite ya, leruo ya anya, obi adị gị ụtọ na ị hụla ọlaedo. Ọ dị obere karịa otu mkpụrụ ọka, dịkwa ụkọ karịa ezigbo dayamọnd. N’eziokwu, ị ga-elegharị anya ma ị̀ ga-ahụ ọlaedo ndị ọzọ.
O nwere ike ịbụ na i mere ụdị ihe ahụ mgbe Onyeàmà Jehova bịara n’ụlọ gị, jiri Baịbụl zie gị ozi ọma mere ka i nwee olileanya. I nwere ike icheta mgbe mbụ ị chọtara ihe e nwere ike ịkpọ akụ̀ bara ezigbo uru. O nwere ike ịbụ mgbe mbụ ị hụrụ aha Chineke, bụ́ Jehova, na Baịbụl. (Ọma 83:18) Ma ọ bụkwanụ ya abụrụ mgbe ị mụtara na ị ga-abụli enyi Jehova. (Jems 2:23) Ị matara ozugbo na i nwetala ihe bara uru karịa ọlaedo. Ma eleghị anya, ị chọsikwuru ike ịmụta ihe ndị ọzọ bara ezigbo uru ka akụ̀.
ONYE AHỤ NWERE IKE ỊCHỌKWU
Mgbe ụfọdụ, irighiri ọlaedo na-adị n’ime mmiri. N’oge a na-ejikarị aga achọ ya, ndị na-agbasi mbọ ike ịchọta ọlaedo nwere ike ịchọgide n’ụdị ebe ahụ hụ ọtụtụ ọlaedo a ga-ereta ọtụtụ nde naịra.
Mgbe gị na Onyeàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl, o nwere ike ịdị gị ka ị̀ bụ onye jí efere na-achọ ọlaedo n’ime mmiri. Ka ị na-atụgharị uche n’amaokwu Baịbụl dị́ iche iche, ị matakwuru ihe Baịbụl kwuru, okwukwe gị esikwuo ike. Ka ị na-amụtakwu eziokwu ndị dị́ na Baịbụl, ị matara otú ị ga-esi mee ka gị na Jehova dị́ ná mma na otú ị ga-esi nọsie ike n’ịhụnanya ya ka i nwee ike ịdị ndụ ebighị ebi.—Jems 4:8; Jud 20, 21.
Ị̀ na-agbasi mbọ ike ịmụta eziokwu Baịbụl bara ezigbo uru otú ahụ onye na-achọ ọlaedo na-agbalịsi ike ịchọta ọlaedo?
O nwere ike ịbụ na ị nọ na-amụsi Baịbụl ike ka ị mụta eziokwu bara ezigbo uru otú ahụ onye na-achọ ọlaedo na-agba mbọ ịchọta ọlaedo n’ime mmiri. Mgbe ị mụtachara eziokwu gbara ọkpụrụkpụ dị́ na Baịbụl, o nwere ike ịbụ na o mere ka i nyefee Chineke onwe gị ma mee baptizim.—Mat. 28:19, 20.
ONYE AHỤ NWERE IKE ỊGBASI MBỌ IKE
Onye na-achọ ọlaedo nwere ike ịhụ irighiri ọlaedo n’ime ụdị nkume ụfọdụ. Otú irighiri ọlaedo si eju n’ime ụdị nkume ahụ na-eme ka ndị na-achọ ọlaedo kụwaa ya ma wepụtachaa ọlaedo ndị ahụ. A kụwaa ya, i nwere ike ị gaghị ahụ ọlaedo dị́ na ya ozugbo i lere ya anya. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na ị hụ nnukwute nkume dị́ arọ ka akpa simenti iri abụọ, ọlaedo dị́ n’ime ya ga-eji obere ihe karịa mkpụrụ akị. Ma, ndị na-achọ ọlaedo na-agba mbọ kụwaa nkume ahụ n’ihi na ha ma uru ọlaedo bara.
Mmadụ kwesịkwara ịna-agbasi mbọ ike mgbe ọ mụtachara “ozizi ndị mbụ banyere Kraịst.” (Hib. 6:1, 2) Mgbe ị na-amụ Baịbụl, i kwesịrị ịgbalịsi ike ka ị mụta ihe ọhụrụ na ihe ga-abara gị uru. N’ihi ya, gịnị ka ị ga-eme ka i nwee ike ịna-amụta ihe mgbe ị na-amụ Baịbụl n’agbanyeghị na o teela ị mụwara Baịbụl?
Ka ọ na-agụ gị agụụ ịmụta ihe. Amụla ihe naanị elu elu. Na-agbasi mbọ ike. Ị ga-amụta ihe bara ezigbo uru na Baịbụl gbasara amamihe Chineke na ihe ọ chọrọ ka anyị na-eme. (Rom 11:33) Jiri akwụkwọ ndị e ji eme nchọnchọ n’asụsụ unu na-eme nchọnchọ ka i nwee ike ịna-amụtakwu ihe na Baịbụl. I mewa nchọnchọ, wetuo obi ka ị mata ihe i kwesịrị ime banyere nsogbu gị na otú Baịbụl si zaa ajụjụ ndị i nwere. Jụọ ndị ọzọ amaokwu Baịbụl na isiokwu ndị kacha nyere ha aka ma gbaa ha ume. Na-akọrọ ndị ọzọ ihe ndị tọrọ gị ụtọ ị mụtara mgbe ị na-amụ Okwu Chineke.
Ma, ihe i kwesịrị ibu n’obi na-amụ ihe abụghị ka ị mụọ ya buru n’isi. Pọl onyeozi kwuru na “ihe ọmụma na-afụli elu.” (1 Kọr. 8:1) N’ihi ya, gbalịsie ike ka ị dịrị umeala n’obi, ka okwukwe gị siekwa ike. Inwechi ofufe ezinụlọ na ọmụmụ ihe onwe onye anya ga-enyere gị aka ịna-eme ihe Jehova kwuru, meekwa ka ị na-enyere ndị ọzọ aka. Nke kadị mkpa bụ na ị ga na-enwe aṅụrị n’ihi na i nwetala ihe bara uru karịa ọlaedo.—Ilu 3:13, 14.
Leba anya n’otú ezinụlọ ụfọdụ si enwe ya ná mba dị iche iche ma mara ihe i nwere ike ime.
mailto:?body=Na-achọ Ihe Bara Uru Karịa Ọlaedo%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2016607%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Na-achọ Ihe Bara Uru Karịa Ọlaedo
Ofufe Ezinụlọ: Ihe Mere Inwe Ya Ji Esi Ike na Uru Inwe Ya Bara